Kaalinforniyaatti lakkoofsi namoota dhukkubna tiruu 'A' tiin du'anii 19 gahe - BBC News Afaan Oromoo
Kaalinforniyaatti lakkoofsi namoota dhukkubna tiruu 'A' tiin du'anii 19 gahe
Goodayyaa suuraa Qondaaltonni fayyaa Saan Fraansiiskoo dhukkubi tiruu kun akka babal'atu godhaniiru
Kaaliforniyaatti dhukkuba tiruu 'A' tiin namoonni du'an 19 yoo du'an, kunis kan uumamuu erga bulchaan istaatiichaa fayyaa ilaalchisee labsi yeroo muddama erga baase booda ture.
Namoonni 500 ol dhukkuba daddarbaa vaaireesiin dhufuu kanaan erga Sadaasa kan qabaman yeroo ta'u hedduun isaanii namoota mana jireenyaa hinqabne ta'uun isaanii beekaameera.
Dhukkubni tiruu A yookaan hepatitis A jedhamuun beekamu kun kan inni dadarbu karaa bobbaadhan wayita ta'u namaa gara namaatti kan inni ittiin daddarbuus sal-qunnamtii fi nyaata fi meeshaa kanaan faalamee tuquudhaani.
Dhukkubnni daddarbaan tiruu A kun waggoota 20'n darban keessatti yeroo lammaffaaf Ameeriikaa keessatti mudachuusaati.
Goodayyaa suuraa Da'oo ykn dunkaana namoonni mana hinqabne yeroof akka keessa jiraataniif magaalaa Saan Di'eego keessatti dhaabame.
Saan Di'eegoo keessatti gara namoota 500 ol ta'an dhukkuba kanaan akka qabaman mirkaneefamee wayita gabafamu, qondaaltoonni naannoo sanaas dhukkuba kana to'achuuf jecha tarkaanfiilee dandiwwan magaalaa bleach yookaan barakiinaadhaan miicaniiru akkasumas iddowwan harka itti dhiqataan bakka bakkatti dhaabaniiru.
Bulchaan magaalaa sanaas Isteetii Saan Di'eegootti qoratoonni naannoo kan ta'anii bisahaan dhugaatii magaalatii akka bobbaadhaan faalame beekuuf akka qorannoo geggeesaniis waamicha godhaniiru. Dhukkubni Tiruu A kun bishaan falameenis darbuun isaa beekamadha.
Goodayyaa suuraa Dhukkubi tiruu 'A' ykn Hepatitis A sababa fayyadama bu'uuraa qulqulinaa hinqabneef jecha namoota mana hinqabne gidduutti akka salphaatti babal'ata, jedhu oggeesonni.
Dhukkubni dadarbaan kun keessattu kan inni irra caalaa hubu magaalatti keessatti namoota mana hinqabne wayita ta'u kunnis qulqulina mataa isaanii fi naannoo jiraatan eeguuf tajaajila bishaanii fi mana fincaanii argachuu warra hindandeenyeedhaa, jedhu oggeesoonni.
Dhukkubni vaayiresiin dadarbu kun bobbaatii harka keenya utuu hindhiqatiin hafuun, bishaan fi nyaata keessa galuun karaa afaanii qaama nama keessa wayita galu yeroo ta'u kunnis haala qulqulinaa wayita hira'tutti.
Saan di'eegoo keessatti namoonni 5,000 ol ta'an mana yookaan da'o jala ciisan hinqabani - kunnis %10 waggaa darbe irra kan olgudateedha - akka gartuu dhihoo kana dhaabachuun namoota mana hinqabne irratti qorannoo geggeesse tokkootti.
Haala walfaakaataadhaan naannoo Saantaa Cruuzitti, Loos Anjelesitti akkasumas Saan Fraansiskootti kaaba Kaalifoorniyaa keessattis dhukkubni kun kan gabaafamee fi talaallii barbaachisaan namoota mana hinqabne kumaatamaan lakkawamaniif akka kenname qondaaltonni dubbatu.
Akka qondaatoonni jedhanitti, dhukkubni tiru A kun, dhukkubsatoota 100 keessaa dhukkubsataa tokko qofa kan ajjeessu ta'e utuu jiruu haala namoota dhukkuba kanaan qabaman irraa kan ka'e kaalifoorniyaa keessatti garuu kana caalaa akka ajjeesse dubbatu.
Malattowwan dhukkuba kanaa ho'insa qaamaa dabalatee, dadhabbii, waraansa garaa, singiggo fi balaqamu of keessa qaba. Ija fi gogaa qaama namaas gara bifa keellootti jijiiruunis mallattoowwan jiraachuu maluudha.
Bulchaan istaatichaa Governoor Jeerry Braawoon talaalliin Kikinikootaa fayyaa namoota mana yookan da'o jala jiraatan hinqabne waliin hojjetan bira hatatamaan akka gahuu danda'uuf jecha gaafa Onk 13 labsi haala muddama kenanniiru.
Qoondaaltonni fayyaa immoo dhukkubi dadarbaan kun raawatee baduuf ji'oota yookaan waggoota fudhaachuu danda'aa jedhu